Munaasabad lagu soo dhaweynayay sanadka cusub oo xalay lagu qabtay degmada Yaaqshiid – Radio Muqdisho
Munaasabad lagu maamuusayay isdhexgalka bulshada iyo soo dhaweynta sanadka cusub ayaa xalay lagu qabtay xarunta degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Munaasabadda oo uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Yaaqshiid ayaa waxaa ka qeybgalay xildhibaano, saraakiil ciidan iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Cismaan Cadaawe ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay isku xirka iyo isdhexgalka bulshada, wuxuuna rajeeyay in sanadkan cusub uu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed u horseedo nabad iyo baraare.
Gen. Madaale oo ah taliyaha qetybta gobolka Banaadir oo halkaasi ka hadlay ayaa maamulka degmada Yaaqshiid ugu hambalyeeyay wax qabadkiisa, wuxuuna ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed iney ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga dalka.
Munaasabada ayaa lagu soo bandhigay sugaan kala duwan oo lagu soo dhaweynayay sanadka cusub ee 2015-ka, waxeyna munaasabaddu kusoo gebageboowday jawi wanaagsan.